စာအုပ်အမည် - A series of Unfortunate Events
စာရေးသူ - Lemony Snicket
ဘာသာပြန်စာအုပ်အမည် - ကြမ္မာမုန်တိုင်း
ဘာသာပြန်စာရေးသူ - လင်းခန့်
စာအုပ်တိုက် - ကံ့ကော်ဝတ်ရည် မှ 2019 May ပထမအကြိမ် ပုံနှိပ်ခြင်း
အမျိုးအစား - ဘာသာပြန်ဝတ္ထုရှည်(အခန်းဆက်)
တန်ဖိုး - ၆၅၀၀ ကျပ်
စာမျက်နှာ- ၄၆၂ pages
အဖုံးဒီဇိုင်း - ပြည့်စုံ
???? ဝတ္ထုအကြောင်း တွေးမိတွေးရာ
• စာအုပ်တစ်အုပ်ရဲ့ အမှာစာမှာ ဖတ်ဖူးတာလေး သတိရတယ်။ "သူတို့ဆီက ကလေးဖတ်တွေကို ဒီက လူကြီးတွေ ဖတ်နိုင်ဖို့ ဘာသာပြန်ပေးသူတွေကို ကျေးဇူးတင်ရမယ်" တဲ့။ ဟုတ်ပါရဲ့ .. ဒီလို ကလေးတွေ ဖတ်တဲ့ စာအုပ်တွေကို လူကြီးတွေ ဖတ်မိမှ ကလေးတွေက ဘာစာအုပ်ဖတ်ရမလဲ မေးလာရင် ညွှန်ပြလို့ ရမှာပေါ့။ *ကလေးဆိုတာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကို ရည်ညွှန်းပါသည်*
• ဒီစာအုပ် Lemony Snicket’s A series of Unfortunate Events ဆိုတာ ကမ္ဘာတစ်လွှား အောင်မြင်ချက်ဆိုတာ (ကလေးတွေကြားမှာပေါ့လေ) အုပ်ရေ သန်း ၆၀ ကျော်ရောင်းရပြီး ဘာသာစကား ၄၀ ကျော်ထိ ပြန်ဆိုကြတယ်။
• ကြမ္မာမုန်တိုင်းဟာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေ အဓိကဖတ်ဖို့ ရေးထားတဲ့ စာအုပ်ပါ။ စာအမျိုးအစားကတော့ dark humor အမျိုးအစားလို့ သတ်မှတ်ကြတယ်။ လက်တွေ့လောကမှာ မရှိနိုင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးပါ။ မောင်နှနှမ ၃ ယောက်။ ဝိုင်အိုလက်၊ ကလော့စ်နဲ့ ဆန်နီ။ ၁၄ နှစ်၊ ၁၂ နှစ်နဲ့ ၁ နှစ်ကျော်။ ဇာတ်လမ်းက စကတည်းက ယဥ်သကို ဆိုသလို မောင်နှမ ၃ ယောက် ကမ်းခြေမှာရှိနေတဲ့အချိန် သူတို့အိမ်က မီးအကြီးအကျယ်လောင်ပြီး မိဘတွေ ပါသွားရာက စတယ်။ ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းအကြောင်းမှာ ဆက်ပြောကြစို့။
???? ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းအကြောင်းနှင့် ဝတ္ထုဇာတ်ကောင်များ
• "ပျော်စရာဇာတ်သိမ်းခန်းနှင့် အဆုံးသတ်သော ဇာတ်လမ်းများကို စိတ်ဝင်စားလျှင် သင့်အနေဖြင့် အခြားစာအုပ်တစ်ခုခုကို ဖတ်လိုက်တာ ပိုကောင်းပေမည်။ ဤစာအုပ်တွင်တော့ ပျော်စရာဇာတ်သိမ်းခန်းမရှိသလို ပျော်စရာနိဒါန်းဖြင့်လည်း စမည် မဟုတ်ချေ။ ဇာတ်လမ်းအလယ်မှာလည်း ပျော်စရာဆိုတာ မရှိသလောက်ပင်" ဆိုတဲ့ အခန်း (၁) ရဲ့ အစ စာကြောင်းတွေ။ အထက်မှာ ဆိုပြီးသား ကလေး ၃ ယောက်ရဲ့ ဘဝရဲ့ ဘဝအထွေထွေပေါ့။
• မိဘမဲ့ ဒုက္ခသည်လေး ၃ ယောက်မှာ အသက် ၁၈ နှစ် ပြည့်မှ ရမယ့် အမွေတွေက ရှိတယ်။ သူတို့ကို အုပ်ထိန်းခွင့်ရတာက ဦးလေး ဘယ်နှဝမ်းကွဲမှန်း မသိတဲ့ မြို့စားကြီး အိုးလဖ်။ မြို့စားကြီးသာပြောတာ တကယ်က ပြဇာတ်မင်းသားကြီးတစ်ဦး။ ပြောရရင် လူဆိုး၊ ဗီလိန်ပေါ့။ ဘော်လဒါးယားတို့ အမွေကို လိုချင်နေသူ။ စာရေးဆရာဖန်တီးတဲ့ ဇာတ်လမ်းမှာ ကလေးတစ်သိုက်ရဲ့ ဒုက္ခပေါင်းများစွာနဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို ဖတ်ရင်းနဲ့ စိတ်တိုလာတဲ့အထိ ဖတ်ရမယ်။
???? စာရေးဆရာနဲ့ ဘာသာပြန်သူ
• မူရင်းစာရေးဆရာအမည် 'လီမွန်နီစနစ်ကတ်' ဆိုတာက ဒယ်နီရယ်ဂျေဟန်းဒလားရဲ့ ကလောင်အမည်ကွဲ။ ဒီစီးရီးအတွက် သီးသန့်ပေးထားတဲ့ ကလောင်အမည်။ လီမွန်နီစနစ်ကတ်ကိုယ်တိုင် နောင်တစ်ချိန် ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာ ပါလာတဲ့ ပုံစံနဲ့ ရေးမှာမို့ စာရေးဆရာဟာ ဒီစီးရီးမှာ ကလောင်အမည်သီးသန့်ထားခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုတယ်။
• ဘာသာပြန်သူ ကိုလင်းခန့်အကြောင်းက အထွေအထူးပြောစရာမရှိပါဘူး။ သူရေးတာတွေချည်း လိုက်ဖတ်ရင်ကို တခြားဟာတွေ ဖတ်ဖို့ အချိန်မပေးနိုင်လောက်အောင် ဟောတစ်အုပ် ဟောတစ်အုပ် ထွက်နေသူ။ ထွက်သမျှလည်း ကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ ဒီဆရာလေးဆီက ဆေးနည်းတောင်းရမယ့်ပုံ။ ????
???? ပြောချင်တာ -
• မူရင်းက ၁၃ အုပ်တွဲ ထွက်တာကို ဒီဘာသာပြန်က ပထမဆုံး ၃ အုပ်ကို ပေါင်းပြန်ထားတာ။ နာမည်တွေနဲ့ပြောရရင် -
အတွဲ ၁ မလှပသော နိဒါန်း
အတွဲ ၂ တွားသွားသတ္တဝါ အခန်းကြီး
အတွဲ ၃ ပြတင်းပေါက်ကြီး၏လျှို့ဝှက်ချက် တို့ဖြစ်တယ်။
• ကျနော့်အနေနဲ့ သဘောအကျဆုံးက အတွဲ ၂ ဖြစ်ပြီး စာဖတ်ဖော်ကြီး ကိုကျော်လွင်ကတော့ အတွဲ ၃ ပါတဲ့။ ဒီလိုကွဲလွဲနေတာကိုက ချစ်စရာပါ။ ဘယ်သူက ဘာကြောင့် အကြိုက်မတူလဲ ပြောဆိုရင်း ကိုယ်နားမလည်တာကို မြင်မိသွားတာမို့ပါ။
• စိတ်ညစ်စရာတွေ အတော်ကောင်းတဲ့ စာအုပ်လို့ ပြောချင်ပေမယ့် ရွှံ့တွေကြားထဲက ကြာပန်းလေးလို အလှတွေကို ဒီကြမ္မာမုန်တိုင်းမှာ တွေ့ရမယ်။ ဒီလိုမျိုး လှပမှုတွေကပဲ ဒီကလေးဖတ်စာအုပ်ကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက လူကြီးတွေ တရှိုက်မက်မက် စွဲလမ်းခဲ့ကြတာပဲ မဟုတ်လား။ အတွဲ ၄၊ ၅ တွေ ဖတ်ချင်နေပါပြီ။ ကယ်ရီးအွန် ညီလေး လင်းခန့်။